Abazali bazibambele mathupha kuvulwa izikole - Ilanga News
Home Izindaba Abazali bazibambele mathupha kuvulwa izikole
Abazali bazibambele mathupha kuvulwa izikole
Kunezikole eziwu-11 ezingavulwanga eMkhambathini ngenxa yombango
ABAFUNDI baseSivanda High School, KwaMashu u-Asanda Mnyatheza, uSibahle Mkhize, uPamela Mkhize, uFundiswa Shabalala no-Olwethu Mkhize.
SIZIBAMBELE mathupha isigungu esilawula isikole eDaluxolo Primary School, KwaMashu, eThekwini, sihlola isikole nenhlalakahle yabafundi njengoba izolo ngoLwesithathu bekuwusuku lokuqala kuvulwe izikole. Usihlalo wesigungu, uNkk Phumzile Tembe, utshele leli phephandaba ukuthi inhloso yabo enkulu wukuthi babuke ukuphepha kwabantwana, ukuhleleka kwezinto nokwakha ukuxhuma na okuhle phakathi kothisha, abafundi nabazali. Uveze ukuthi bebengafuni ukuxoxelwa uma kukhona izinkinga zokugqoza kwezinsizakusebenza njengoba kuwusuku lokuqala olubalulekile emfundweni yaKwaZulu-Natal.
“Besifuna nokusiza othisha lapho esibona khona bedinga isandla sethu ezintweni okubalwa kuzona ukuhlela indlela yokusebenza, silungise okungalungile. Kasithandi ukuhambela kude nesikole, kufanele sibheke lapho esingalekelela khona,” kusho uNkk Tembe. Uthe okunye abakuhlelile ngaphambi kokuvulwa kwezikole, wukuthi bamukele abafundi abasha, okubalwa uGrade-R noGrade 1. Uthisha ofundisa uGrade-R kulesi sikole, uNkz Sinenhlanhla Zungu, uthe ikilasi lakhe elisha likuthakasele kakhulu ukubona uthisha phambi kwalo nokufundiswa okokuqala nje empilweni yalo. “Bajabule kakhulu, akekho ophatheke kabi, ngisho abazali babashiye bethokozile,” kusho uNkz Zungu.
UNgqongqoshe wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu Kwazi Mshengu noDkt Reginah Mhaule oyisekela likangqongqoshe wezemfundo eyisisekelo, bavakashele eZwilesizwe Primary School eMgungundlovu, ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi izikole ziqale kahle ukufunda nokufundisa. UMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal uvule kabi usemanzini njengoba kunezikole eziwu-11 ezingavulwanga eMkhambathini ngenxa yezinxushunxushu ezikhona emphakathini njengoba kubangwa ubukhosi kanti eMnambithi kukhona eziphazamisekile ngenxa yokuthi idolobha liphenduke idamu ngenxa kazamcolo.
UMnu Mshengu uthe kuyathusa ukuthi kungani umphakathi ukhetha ukuphazamisa imfundo yabantwana ngento engahlange-ne nezikole. Uveze ukuthi kusatshiswe othisha kanti amasango ezikoleni avaliwe. “Njengoba bekuvulwa, abebezama ukuqaqa amaketango bathole izingcingo ezibasabisayo. Kubike ukuthi umphakathi wenze izikole ithuluzi lokulwa izimpi zawo nezemindeni,” kusho uMnu Mshengu. Njengoba izikole bezivulwa izolo, kusasa ngoLwesihlanu ayaphela amaphupho kubafundi abebenza umatikulestheni ngonyaka odlule njengoba kuphuma imiphumela. Sekuwumlando ukuthi umnyango ubungafuni ukuba imiphumela ikhishwe kwabezindaba uzeseka ngomthetho onqanda ukuba kudalulwe imininingwane yabantu ngaphandle kwemvume yabo. Nokho umnyango ugingqwe phansi yisicelo esifakwe eNkantolo eNkulu yasePretoria ngumfundi oneminyaka ewu-18 ubudala, u Anle Spies, esekwa yiAfriforum, wasijika isinqumo sawo.
Previous articleUxhaswe womasipala owaseSandlwana
Next articleIzikhukhula zishiye kukhalwa eMnambithi